Liverpool Oo Shaacisay In Afar Xidigo Oo Muhiim Ahi Kooxdeeda Ku Soo Laabanayaan Iyo Virgil Van Dijk Oo Daawaday Ciyaarihii Wimbledon-ka. - Gool24.Net
Liverpool Oo Shaacisay In Afar Xidigo Oo Muhiim Ahi Kooxdeeda Ku Soo Laabanayaan Iyo Virgil Van Dijk Oo Daawaday Ciyaarihii Wimbledon-ka.
Kooxda Liverpool ayaa ku dhawaaqday in afar xidig oo kooxdeeda muhiim ka ahi ay sabtida ku soo laaban doonaan xarunta tababarka si ay ula midoobaan Jurgen Klopp iyo ciyaartoyda da’yarta u badnayd ee uu todobaadkan ku soo shaqaynayay.
Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay in sabtida ay kooxdeeda dib ugu soo laaban doonaan afarta xidig ee kala ah Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum iyo Virgil van Dijk kuwaas oo xulalka England iyo Holland uga qayb galay kulamadii UEFA Nations League.
Liverpool ayaa sabtidii la soo dhaafay dib ugu soo laabtay xarunta tababarka kooxdeeda Melwood wuxuuna markaas Klopp haystay 16 ciyaartoy oo da’yar u badan iyada oo kadib ay ku soo biireen Divock Origi, Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren, Naby Keita iyo Simon Mignolet.
Afarta xidig ee sabtida ku soo laabanaya tababarka Liverpool ee kala ah Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum iyo Virgil van Dijk waxay dhamaantood qayb ka ahaayeen shaxda Jurgen Klopp ee uu kulamada badan ugu soo guulaystay xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Laakiin Virgil van Dijk ayaa si buuxda ugu raaxaystay waqtigiisa ugu danbeeya ee fasaxa xagaaga wuxuuna maanta oo khamiis ah ka soo qayb galay daawashada ciyaarihii Wimbledon-ka.
Van Dijk ayaa daawanayay kulankii tennis-ka ciyaaraha Wimbledon-ka ee ay Simona Halep ku garaacday Elina Svitolina iyada oo heshay natiijo 6-1, 6-3 si ay Halep markii ugu horaysay ugu soo baxdo finalka Wimbledon.
Kulanka labaad ee uu Van Dijk daawaday ayaa ahaa kulankii dhex maray Serena Williams iyo Barbora Strycova iyada oo gabadha reer America guul ku gaadhay 6-1, 6-2.
Van Dijk oo barta rasmiga ah ee twitterka ay ku leeyihiin Wimbledon la hadlay ayaa la waydiiyay in uu deganaan dareemay kadib guushiisii Champions League wuxuuna yidhi: “Waqti ayaa ka soo wareegay, sidaa daraadeed fasax fiican ayaan qaatay, waxaan ku faraxsanahay in aan halkan joogo”.
“Kulamada qaar ayaan TV-yada ka daawaday labadii maalmood ee ugu danbeeyay, waxaan filayaa in aan hadda halkan joogaa in ay khaas tahay, waxaanan wanaag ka rajaynayaa kualmada maanta maalin fiican ayayna noqon doontaa”.
Liverpool ayaa caawa kulankeeda ugu horeeya ee saaxiibtinimo wajahaysa kooxda Tranmere Rovers oo ay kula ciyaarayan garoonka Prenton Park waxaana u xigi doona kulanka Bradford City ee ka dhici doona Valley Parade waxayna kadib Reds u safri doonaan Maraykanka.